Shirkadda Xiriirka Dadweynaha | Wakaaladda PR & Suuqgeynta | Xiriirka Dadweynaha ee TOC
TOC waxay muujineysaa podcast
Xafiiska Sheriff County San Joaquin
Nolosha Jawaabta Ugu Horeysa
Lacag & Wright LLP
Waaxda Booliska Rialto
Kormeeraha Curt Hagman
Waad salaaman tihiin, Waxaan nahay TOC Xiriirka Dadweynaha
Waxaan bixinaa xiriirka dadweynaha, suuq geynta dijitaalka, iyo xalalka isgaarsiinta istiraatiijiyadeed oo leh natiijooyin la xaqiijiyay.
Brand Branders & Sheeko-yaqaanno
Bulshadan maanta joogta, dhisida kalsoonida bulshada iyo joogtaynta sumcad xirfadeed waa mid ka mid ah howlahaaga ugu muhiimsan. Kaliya maahan fariin waqtigeeda ku socota oo hufan inay muhiim u tahay sameynta taasi, laakiin waxay noqotay rajo. Ha u oggolaan dadka kale inay abuuraan sumcaddaada oo ay sheekadaada kuu sheegaan.
Habka isdhexgalka ee loo maro baloogyada, joornaalada, naqshadeynta garaafka, iyo adeegyo sawir iyo muuqaal fiidiyoow ah.
Samee sawir u eg dadka marka ay arkaan astaamahaaga aqoonsiga ururkaaga ama shirkaddaada.
Shabakad si gaar ah loo calaamadeeyay, degel xirfadle ah ayaa ah aalad suuqgeyn wax ku ool ah iyo irridda macaamiisha suurtagalka ah.
Sideen kuu caawin karnaa
Aasaaska Ma Sameyno
Haddii aad raadineysid qaab ku-meel-gaadh ah, hal-cabbir-ku-habboon oo dhan oo ku saabsan sumaddaada iyo suuqgeynta, markaa ma nihin ciyaar fiican. Xidhiidhka Dadweynaha ee TOC, waxaan fahamsanahay in urur kasta uusan isku mid ahayn, sidaa darteed istiraatiijiyaddaada suuq-geynta sidoo kale noqon mayso. Kooxdayada ayaa caan ku ah riixitaanka xuduudaha iyo carqaladeynta caadada. Haddii tani aysan kaa nixin, ka dib ha kuu ogolaato TOC.
Sannado Khibrad Isku Jir ah
Qaabkeena 4 Tallaabo ah
Qiimaynta bilowga ah
Macaamiil walba waa la qiimeeyaa lana qiimeeyaa si loo sameeyo istiraatiijiyad gaar ah oo ku habboon baahidooda.
Sameynta qorshe qeexaya yoolalka gaarka ah iyo waqtiyada istiraatiijiyadda suuqgeynta dhijitaalka ah ee macmiilka.
Tani waa halka aan ka hirgalino isgaarsiintaada iyo istiraatiijiyad suuqgeynta dijitaalka ah.
Waxaan la socon doonaa horumarka iyo natiijooyinka istiraatiijiyaddaada si loo hubiyo in aan ka soo baxeyno yoolalkayaga.
Waxaan nahay xiriir buuxa oo bulshada ah, suuq geyn dijital ah, iyo shirkad isgaarsiin istiraatiiji ah. Waxaan haynaa in ka badan 100 sano oo khibrad ah oo isku dhafan oo leh dhinacyo kala duwan oo xiriirka dadweynaha ah, waxaan kula talineynaa macaamiisheenna iyadoo lagu saleynayo aqoonta gacanta iyo aragtida koowaad. Waxaan helnaa aqoon durugsan oo ku saabsan warshadahayada macmiilkayaga ah waxaana isticmaalnaa qaab gacan qabasho ah oo lagu hirgelinayo istiraatiijiyadooda suuqgeynta. Waxay u egtahay inaad leedahay koox kuu gaar ah oo PR ah.
Kaga Bogo Xiriirka Dadweynaha TOC
Ma iska diiwaangelisay warsideena? Waxaan kuu balanqaadeynaa inaadan ka qoomameyn doonin.
Waad ku mahadsan tahay rukumashada!
Maxay Macaamiishayadu waxay leeyihiin
Chief Mark Kling, Waaxda Booliska Rialto
La shaqeynta Xiriirka Dadweynaha ee TOC si gabi ahaanba loo badalo isgaarsiinta iyo muuqaalka internetka runti waa wax cajiib ah. Sababta oo ah asalka fulinta sharciga ee Tamrin, waxay fahantay si sax ah waxa aan ugu baahanahay si aan u gaadhno hadafkeena.
Qareen Tristan Pelayes, Xafiisyada Sharciga ee Pelayes & Yu
Marka laga hadlayo xiriirka dadweynaha, TOC PR ayaa gacanta ugu wanaagsan. Laga soo bilaabo sii deynta wararka ee warbaahinta bulshada iyo shirarka jaraa'id, waxay yaqaanaan sida loogaaga dhigo soo-gaadhis wanaagsan.
Alex Weinberger, Milkiilaha Ganacsiga
Waan jeclahay inaan u sheegi karo TOC Xiriirka Dadweynaha aragtideyda ku aaddan meheraddeyda wayna ogyihiin sida saxda ah ee la sameeyo si loogu fuliyo si bilaa iibi ah. Waxay daryeelaan suuqgeynteyda iyo calaamadeynta si aan diiradda u saaro macaamiishayda.
Ka bilow maanta
Istaraatiijiyadda Suuqgeynta Meeshaada dhig
Diyaar ayaan u nahay inaan kuu adeegno
Eeg dhammaan xubnaha kooxda
Mulkiile & Agaasime Guud
Abuuraha Mawduuca Lead
Samee aqoonsigaaga muuqaal adiga oo adeegsanaya sumadaynta adigoo raacaya shanta talooyin
Xiriirka Dadweynaha ee TOC|Sep 11, 2021| Suuqgeynta Ganacsiga, Suuqgeynta Guud
Istaraatijiyadda astaanta ayaa ah qaybta kaliya ee ugu muhiimsan dhisidda iyo joogtaynta ganacsi guulaystay. Laga soo bilaabo ...
Kuwani waa saacado iyo maalmaha usbuuca si looga fogaado dhejinta Instagram
Xiriirka Dadweynaha ee TOC|Aug 31, 2021| Media Social Suuq
Khabiirada warbaahinta bulshada iyo maareeyayaasha, dhegayso! Xirfadlayaal ahaan goobta, dhammaanteen waan fahamsanahay muhiimadda ...
Shanta faa iidooyinka ugu sareeya ee LinkedIn ee ganacsiyada, ururada, iyo hay'adaha
Xiriirka Dadweynaha ee TOC|Jul 26, 2021| Suuq-, Media Social Suuq
Waxaa jira faa'iidooyin badan oo muuqaalka LinkedIn uu bixin karo ganacsi, mid ka mid ah kaas oo xoojinaya kalsoonida ...
Wada-hawlgalayaasha la doorbiday
Faa'iidooyinka Suuqgeynta Waaxda Dadweynaha
Sharciga Sare u qaadista
Liiska degdegga ah
Ku Dhaqanka Sharciga Bulshada
Relations 2021 TOC Xiriirka Dadweynaha. Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay
Websaytka Awooday Xiriirka Dadweynaha ee TOC
ku soo biir liiskayaga boostada
Ka hel wararkii ugu dambeeyay iyo cusbooneysiinta kooxdayada sanduuqaaga sanduuqa!
La kulan kooxdeena
Xafiiska Sheriff County San Joaquin
Nolosha Jawaabta Ugu Horeysa
Lacag & Wright LLP
Waaxda Booliska Rialto
Kormeeraha Curt Hagman